သက်တော် ၆၆ နှစ်တွင် ခန္ဓာဝန်ချတော့မည် ဟု မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး !!! – MyanmarEating
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် နှစ်စဉ်ဝါတွင်းကာလများတွင် လူသူမနီးသည့်တောတောင်လျှိုမြောင်ကြားမှ သဘာဝလှိုင်ဂူကြီးများအတွင်းတွင် တစ်ပါးတည်းတရားဘာဝနာများစီဖြန်းကျင့်ကြံလေ့ရှိပါသည် ။ ဆရာတော်တရားကျင့်ကြံသည့်ဂူများသည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် နေရာဒေသမတူဘဲ ဆရာတော်၏စိတ်အာရုံအရရွေးချယ်သောဂူများမှာသာတရားကျင့်ကြံလေ့ရှိပါသည် ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခရိုင်မှ ၃ နာရီအကြာ ( မိုးရာသီ ) မောင်းနှင်ရသော မုန်းကျတ်ရှမ်းရွာအနီးမှ တောင်ခြေဂူထဲတွင်ဝါတွင်းကာလ၌ တရားကျင့်ကြံပွားများခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ယခုနှစ်မှာတော့ မုန်းကျတ်ရွာမှတဆင့် ယာဉ်ဖြင့် နာရီဝက်ခန့်မောင်းနှင်ရသည့် ” ဖာလျန်း ” တောင်ခြေအနီးမှတောင်ထိပ်သို့ အချိန် ၁:၃၀ ခန့်အကြာခက်ခဲစွာခြေလျင်တက်ကြရပါသည် ၊
ပေါ့ပါးစွာကြွမြန်းသွားသည်ဟုမျက်မြင်ဒါယိကာများကပြောပြကြပါသည် ၊ အဆင်း ၁ နာရီကြာမြင့်သည့် ” ထမ့်ဖာလျန်း ” ( ဂူအနီ )အတွင်း၌ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားများ ၊ ဝိပဿနာတရားများကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခဲ့ရာ ဂူအတွင်းရှိမမြင်အပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များမှဆရာတော်အား
ဤဂူအတွင်းလာရောက်တရားမကျင့်ကြံနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနှောင့်ယှက်မှုများပြုလုပ်ကာဆရာတော်ကို မောင်းထုတ်ခဲ့ကြပါသည် ၊ မထွက်သွားပါက သေမည်ဟုကြိမ်းမောင်းခဲ့သော်လည်းဆရာတော်မှ သေလည်းဤဂူအတွင်း၌သာသေမည် ၊
မထွက်သွားနိုင်ပါဟုငြ်းဆိုခဲ့ပါသည် ၊ ထိုထက်မကဘဲဆရာတေည်ခွေးနှင့်သာသွားအိပ် ၊ ဂူထဲမလာနဲ့ဟုတားမြစ်ရာ ဆရာတော်မှငါလဲ ခွေးဘဝကလာခဲ့တာဘဲ ၊ ဒီတော့အတူတူနေကြမည်ဟုမိန့်ကြားခဲ့ပါသည် ။ ယခုလိုလာရခြင်းအကြောင်းမှာ
ကောက်းမှုကုသိုလ်အဖို့ပိုလာရောက်မျှဝေပေးနိုင်ရန်သာဖြစ်တယ်ဟု မိန့်ကြားပြီး မေတ္တာဓါတ်ကြီးမားပြီး ကုသိုလ်ပါရမီအခံကြောင့်သာဆက်လက်ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ဤဂူအနီသည် တော်တော်ထူးဆန်းပြီးမြွေနဂါးကြီးများ ၊ ရံဖန်ရံခါဝံနှင့်ကျားသစ်များလည်းလာရောက်ကြောင်းနှင့်တော်ရုံကုငိုလ်ပါရမီနှင့်ဥအေက္ခာတရားနည်းပါးပါက
ယခုလိုကျင့်ပြံနေထိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆရာတော်မှ အရှင်သုခမိန္ဒ( စဝ်သုခမ်း ) အားမြွက်ကြားခဲ့သည့် VDO File တွင်ကြားသိခဲ့ရပါသည် ။
” ထမ့်ဖာလျန်း ” ဂူသည်ညနေနေဝင်ချိန်များတွင် ဂူမှာအနီရောင်သန်းပြီး အင်မတန်လှပသည်ဟုလည်း ဒေသခံများမှပြောပြကြပြီး ထိုနေရာသို့ဒေသခံတောလိုက်မုဆိုးများပင်မသွားရဲကြပါ ၊ သားရဲတိရိစ္ဆာန်များပေါများပြီးအန္တရာယ်များလွန်း၍ဖြစ်ပါသည် ။
ဆရာတော်သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ၊ အောက်တိုဘာ (၂၄) ရက်နေ့ ၊ မနက် (၀၉:၀၀) ချိန်ခန့်တွင် ဂူအတွင်းမှထွက်ပြီးပဗ္ဗဇ္ဇဆံချအပြီး ဂူအတွင်းမှာဘဲ ပင့်ဖိတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြသော ဒါယိကာများအားတရားဦးဟောကြားကာ မေတ္တာဘာဝနာများစီးဖြန်း၍ သာဓုအနုမောထနာများခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည် ။
ဆရာတော်သည် ထိုဂူမှတဆင့် မိုင်းအွန်တွင် ၊ မိုင်းနောင် ၊ မိုင်းရှူး ၊ မိုင်းရယ် ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်များသို့တရားရေအေးတိုက်ကြွေးပြီး သာသနာပြုလုပ်ငန်းများနှင့် တရားကျင့်စဉ်များကိုလည်း (၂) တိတိဆက်လက်၍ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
ထိုမှတဆင့် တာချီလိတ်မြို့နယ် မိုင်းဖုန်းဒေသသို့ ဒီဇင်ဘာလ တတိယအပါတ်တွင်ပြန်လည်ကြွမြန်းလာမည်ဖြသ်ပါသည်..။
ဇန်နဝါရီလမွေးနေ့ပွဲအပြီးတွင် ဆရာတော်သည်နောက် ဂူကျင့်စဉ် (၃) နှစိတိုက်တိုင်အပြင်သို့မထွက်ဘဲ လှိုဏ်ဂူတော်သို့ပြန်ဝင်မည်ဟုလည်းကြားသိရပါသည် ။
ဆရာတော်သည်သက်တော် ၆၆ နှစ်တွင်ခန္ဓာဝန်ချတော့မည်ဟုလည်းမိန့်ကြားခဲ့သည့်အတွက် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်မပေါင်းနှင့်လာရောက်ဖူးမျှော်သူဒါယိကာအပေါင်းတို့မှလည်း စိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်းခဲ့ကြရပါသည် ။ ခန္ဓာဝန်မချသေးရန်ဝိုင်းဝန်းတားမြစ်လျှောက်တင်ကြပါသည် ။
မုန်းကျတ်ရှမ်းရွာလေးသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀) ခန့်က အိမ်ခြေ (၁၀) လုံးခန့်သာရှိပြီူယခုအခါမှာတော့ အိမ်ခြေ(၈၀) ခန့်ရှိပါသည် ၊ ထိုရွာလေးသည်ရေတွင်းမရှိဘဲ ” မုန်းကျတ်ချောင်း ” ကိုအမှီပြုပြီးနေထိုင်ကြတဲ့အေချမ်းတဲ့ရွာလေးပါ ၊ မုန်းကျတ်ချောင်းကို ဘယ်သောအခါမှတံတားထိုး၍ မရပါ ၊တံတားထိုးသည့်နှစ်တိုင်းတွင်ရေကြီးပြီး ထိုတံတားမှာရေစီးနှင့်မျှောပါလေ့ရှိပါသည် ၊ ထိုချောကင်းလေးသည်နဂါးတို့ပျော်စံမြူးရာချောင်းလေးဟုလည်းယုံကြည်ထားကြပါသည်
သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မိုင်းဖုန်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥာဏ သံဝရသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့မှစ၍ ဝါတွင်းကာလအတွင်း ” ထမ့်ဖာလျန်း ” ဂူအတွင်း၌တရားကျင့်ကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဆရာတော်အားအနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာလာရောက်ဖူးမျှော်ကြည်ညိုကြသည့်ဏည့်ပရိတ်သတ်အပေါင်း ထောင်ချီရှိကြကြောင်း ထိုဂူရှေ့သို့ရောက်ရှိဖူးမျှော်ခဲ့သောဆရာတော်၏ တပည့်ဒါယိကာ စာရေးဆရာမောင်းဖိုးစံ( ဒူးယား) မှအသေးစိတ်ပြောပြ၍သိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ ??
မိုငျးဖုနျးဆရာတျောဘုရားကွီးသညျ နှဈစဉျဝါတှငျးကာလမြားတှငျ လူသူမနီးသညျ့တောတောငျလြှိုမွောငျကွားမှ သဘာဝလှိုငျဂူကွီးမြားအတှငျးတှငျ တဈပါးတညျးတရားဘာဝနာမြားစီဖွနျးကငျြ့ကွံလရှေိ့ပါသညျ ။ ဆရာတျောတရားကငျြ့ကွံသညျ့ဂူမြားသညျတဈနှဈနှငျ့တဈနှဈ နရောဒသေမတူဘဲ ဆရာတျော၏စိတျအာရုံအရရှေးခယျြသောဂူမြားမှာသာတရားကငျြ့ကွံလရှေိ့ပါသညျ ။
၂၀၁၇ ခုနှဈမှစတငျ၍ ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး မိုငျးဆတျခရိုငျမှ ၃ နာရီအကွာ ( မိုးရာသီ ) မောငျးနှငျရသော မုနျးကတျြရှမျးရှာအနီးမှ တောငျခွဂေူထဲတှငျဝါတှငျးကာလ၌ တရားကငျြ့ကွံပှားမြားခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ ။ ယခုနှဈမှာတော့ မုနျးကတျြရှာမှတဆငျ့ ယာဉျဖွငျ့ နာရီဝကျခနျ့မောငျးနှငျရသညျ့ ” ဖာလနျြး ” တောငျခွအေနီးမှတောငျထိပျသို့ အခြိနျ ၁:၃၀ ခနျ့အကွာခကျခဲစှာခွလေငျြတကျကွရပါသညျ ၊
ပေါ့ပါးစှာကွှမွနျးသှားသညျဟုမကျြမွငျဒါယိကာမြားကပွောပွကွပါသညျ ၊ အဆငျး ၁ နာရီကွာမွငျ့သညျ့ ” ထမျ့ဖာလနျြး ” ( ဂူအနီ )အတှငျး၌ကမ်မဋ်ဌာနျးတရားမြား ၊ ဝိပဿနာတရားမြားကငျြ့ကွံပှားမြားအားထုတျခဲ့ရာ ဂူအတှငျးရှိမမွငျအပျသညျ့ပုဂ်ဂိုလျမြားမှဆရာတျောအား
ဤဂူအတှငျးလာရောကျတရားမကငျြ့ကွံနိုငျအောငျအမြိုးမြိုးနှောငျ့ယှကျမှုမြားပွုလုပျကာဆရာတျောကို မောငျးထုတျခဲ့ကွပါသညျ ၊ မထှကျသှားပါက သမေညျဟုကွိမျးမောငျးခဲ့သျောလညျးဆရာတျောမှ သလေညျးဤဂူအတှငျး၌သာသမေညျ ၊
မထှကျသှားနိုငျပါဟုငျွးဆိုခဲ့ပါသညျ ၊ ထိုထကျမကဘဲဆရာတညျေခှေးနှငျ့သာသှားအိပျ ၊ ဂူထဲမလာနဲ့ဟုတားမွဈရာ ဆရာတျောမှငါလဲ ခှေးဘဝကလာခဲ့တာဘဲ ၊ ဒီတော့အတူတူနကွေမညျဟုမိနျ့ကွားခဲ့ပါသညျ ။ ယခုလိုလာရခွငျးအကွောငျးမှာ
ကောကျးမှုကုသိုလျအဖို့ပိုလာရောကျမြှဝပေေးနိုငျရနျသာဖွဈတယျဟု မိနျ့ကွားပွီး မတ်ေတာဓါတျကွီးမားပွီး ကုသိုလျပါရမီအခံကွောငျ့သာဆကျလကျကငျြ့ကွံနိုငျခွငျးဖွဈကွောငျး ၊ ဤဂူအနီသညျ တျောတျောထူးဆနျးပွီးမွှနေဂါးကွီးမြား ၊ ရံဖနျရံခါဝံနှငျ့ကြားသဈမြားလညျးလာရောကျကွောငျးနှငျ့တျောရုံကုငိုလျပါရမီနှငျ့ဥအက်ေခာတရားနညျးပါးပါက
ယခုလိုကငျြ့ပွံနထေိုငျမညျမဟုတျကွောငျး ဆရာတျောမှ အရှငျသုခမိန်ဒ( စဝျသုခမျး ) အားမွှကျကွားခဲ့သညျ့ VDO File တှငျကွားသိခဲ့ရပါသညျ ။
” ထမျ့ဖာလနျြး ” ဂူသညျညနနေဝေငျခြိနျမြားတှငျ ဂူမှာအနီရောငျသနျးပွီး အငျမတနျလှပသညျဟုလညျး ဒသေခံမြားမှပွောပွကွပွီး ထိုနရောသို့ဒသေခံတောလိုကျမုဆိုးမြားပငျမသှားရဲကွပါ ၊ သားရဲတိရိစ်ဆာနျမြားပေါမြားပွီးအန်တရာယျမြားလှနျး၍ဖွဈပါသညျ ။
ဆရာတျောသညျ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ ၊ အောကျတိုဘာ (၂၄) ရကျနေ့ ၊ မနကျ (၀၉:၀၀) ခြိနျခနျ့တှငျ ဂူအတှငျးမှထှကျပွီးပဗ်ဗဇ်ဇဆံခအြပွီး ဂူအတှငျးမှာဘဲ ပငျ့ဖိတျရနျရောကျရှိလာကွသော ဒါယိကာမြားအားတရားဦးဟောကွားကာ မတ်ေတာဘာဝနာမြားစီးဖွနျး၍ သာဓုအနုမောထနာမြားချေါဆိုခဲ့ကွပါသညျ ။
ဆရာတျောသညျ ထိုဂူမှတဆငျ့ မိုငျးအှနျတှငျ ၊ မိုငျးနောငျ ၊ မိုငျးရှူး ၊ မိုငျးရယျ ၊ တနျ့ယနျးမွို့နယျမြားသို့တရားရအေေးတိုကျကွှေးပွီး သာသနာပွုလုပျငနျးမြားနှငျ့ တရားကငျြ့စဉျမြားကိုလညျး (၂) တိတိဆကျလကျ၍ကငျြ့ကွံပှားမြားအားထုတျမညျဖွဈပါသညျ ။
ထိုမှတဆငျ့ တာခြီလိတျမွို့နယျ မိုငျးဖုနျးဒသေသို့ ဒီဇငျဘာလ တတိယအပါတျတှငျပွနျလညျကွှမွနျးလာမညျဖွသျပါသညျ..။
ဇနျနဝါရီလမှေးနပှေဲ့အပွီးတှငျ ဆရာတျောသညျနောကျ ဂူကငျြ့စဉျ (၃) နှစိတိုကျတိုငျအပွငျသို့မထှကျဘဲ လှိုဏျဂူတျောသို့ပွနျဝငျမညျဟုလညျးကွားသိရပါသညျ ။
ဆရာတျောသညျသကျတျော ၆၆ နှဈတှငျခန်ဓာဝနျခတြော့မညျဟုလညျးမိနျ့ကွားခဲ့သညျ့အတှကျ သံဃာတျောအရှငျသူမွတျမပေါငျးနှငျ့လာရောကျဖူးမြှျောသူဒါယိကာအပေါငျးတို့မှလညျး စိတျနှလုံးညှိုးနှမျးခဲ့ကွရပါသညျ ။ ခန်ဓာဝနျမခသြေးရနျဝိုငျးဝနျးတားမွဈလြှောကျတငျကွပါသညျ ။
မုနျးကတျြရှမျးရှာလေးသညျ လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး (၂၀) ခနျ့က အိမျခွေ (၁၀) လုံးခနျ့သာရှိပွီူယခုအခါမှာတော့ အိမျခွေ(၈၀) ခနျ့ရှိပါသညျ ၊ ထိုရှာလေးသညျရတှေငျးမရှိဘဲ ” မုနျးကတျြခြောငျး ” ကိုအမှီပွုပွီးနထေိုငျကွတဲ့အခေမျြးတဲ့ရှာလေးပါ ၊ မုနျးကတျြခြောငျးကို ဘယျသောအခါမှတံတားထိုး၍ မရပါ ၊တံတားထိုးသညျ့နှဈတိုငျးတှငျရကွေီးပွီး ထိုတံတားမှာရစေီးနှငျ့မြှောပါလရှေိ့ပါသညျ ၊ ထိုခြောကငျးလေးသညျနဂါးတို့ပြျောစံမွူးရာခြောငျးလေးဟုလညျးယုံကွညျထားကွပါသညျ
သဒ်ဓမ်မဇောတိကဓဇ အဂ်ဂမဟာ ကမ်မဋ်ဌာနာစရိယ မိုငျးဖုနျး ဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တဉာဏ သံဝရသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၂၄) ရကျနမှေ့စ၍ ဝါတှငျးကာလအတှငျး ” ထမျ့ဖာလနျြး ” ဂူအတှငျး၌တရားကငျြ့ကွံခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ ။
ဆရာတျောအားအနယျနယျအရပျရပျမှာလာရောကျဖူးမြှျောကွညျညိုကွသညျ့ဏညျ့ပရိတျသတျအပေါငျး ထောငျခြီရှိကွကွောငျး ထိုဂူရှသေို့ရောကျရှိဖူးမြှျောခဲ့သောဆရာတျော၏ တပညျ့ဒါယိကာ စာရေးဆရာမောငျးဖိုးစံ( ဒူးယား) မှအသေးစိတျပွောပွ၍သိရှိရပါသညျခငျဗြာ ??
Originally posted 2018-10-27 04:03:55.